Tuesday, 18 Sep, 2018 11:04 AM
निर्माण व्यवसायी महासंघको यही असोज ४,५ र ६७ गते राजधानी काठमाडौमा महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नृतृत्व समेत चयन गर्दैछ । नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले व्यवसायीहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आागमी नेतृत्वका लागि बिकोइ बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक हुमनाथ कोइरालाले समेत दाबी गरिरहेका छन् । सफल व्यवसायीका रूपमा परिचित कोइराला लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रमा आवद्ध छन् । उनै अध्यक्षका प्रत्यासी कोइरालाासँग न्यूजसेवाले उनले नेतृत्वमा गरेको दाबी र निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे कुराकानी गरेको छ ।
तपाईले निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहनुभएको छ, तपाईको दाबी किन ?
नेतृत्वको दाबी किन भन्दा पनि हाम्रो निर्माण व्यवसायलाई जनता, पत्रकार, राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै नेपालीले नै हेर्ने जुन दृष्टिकोण रहेको छ, पहिले त्यो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ । त्यो परिवर्तन कसरी गर्ने भन्दा जनचेतना जगाउने, पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, राजनीतिकर्मीहरूसँग बसेर छलफल गर्र्नेे र जनताहरुलाई पनि निर्माण व्यवसाय भनेको के हो ? यो कसरी हुन्छ? किन काम बिग्रिन्छ ? किन निर्माण कार्य ढिला हुन्छ ? भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई बुझाउनु र जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । किनभने देश विकास गर्ने भनेकै निर्माणले हो । निर्माणबाट समृद्धि भन्ने नारा पनि रहेको छ । निर्माण कार्य भएन भने देश कुनै पनि कुराले अगाडी बढ्दैन ।साथै निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि केही विकृतिहरू देखिएका छन् । किन आएको छ भने नेपालमा धेरै समस्यामा छ ।
सरकारमा पनि फरक फरक पार्टीहरु रहेका छन् । सरकार ढलमलाएको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुनै समस्यामा छन् भने निर्माण व्यवसायी झनै समस्यामा रहेका छन् । निर्माण व्यवसायमा ती समस्याहरुको हल गर्नुपनेर्, नेपाल आमा बनाउनु पर्ने देखेको भएर निर्माण व्यवसायीको नेतृत्व लिएर यो काम गर्न सक्छु भन्ने विचार मेरो छ । अर्को कुरा गर्छु भन्ने मात्र होइन भित्री मनले नै काम गर्ने हो । कम गर्ने मान्छे लोभी, पापी बन्नु भएन, देशको सेवा गर्छु भन्ने भावना मनमा हुनुपर्छ । जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले म प्रधानमन्त्री होइन प्रधान सेवक हो भन्नुहुन्छ त्यसै गरी मलाई पनि देश र निर्माण व्यवसायीहरूको सेवक बन्ने इच्छा छ ।
तपाईले पनि निर्माण क्षेत्रमा केही विकृति देखिएका छन् भन्नुभयो, यता सरकारले पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्छु भनिरहेको अवस्था छ, सरकार र निर्माण व्यवसायी महासंघको नमिलेको यो तालमेल मिलाउन तपाईको भुमिको के रहन्छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली निर्माण ऐन, निर्माण नियमावली, आर्थिक ऐन, आर्थिक नियमावली जस्ता कुराहरू छन् । यस्ता केही बुँदा भनेका निर्माण व्यवसायीका संविधान जस्तै हो । यो संविधानमा सरकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गरेर त्यसलाई निर्माण व्यवसाय मैत्री ऐन कानुन जबसम्म आउँदैन निर्माण व्यवसायका कार्यमा विभिन्न समस्याहरु रोकिदैन । यी समस्याहरूको अन्त्यको लागि ऐन, कानुन निर्माण व्यवसायी र सरकार पनि मैत्री हुनु पर्छ । नेपाल आमालाई भलो वा संरक्षण गर्ने पनि हुनु पर्दछ । अनि मात्रै निर्माणका कार्यहरू सफल र राम्रा हुन्छन् । ऐन कानुनमा रहेका समस्याहरू जबसम्म संशोधन हुँदैन निर्माण व्यवसाय पनि राम्रो हुन सक्दैन ।
निर्माण व्यवसायका मुख्य समस्याहरू के के हुन् ?
निर्माण व्यवसायका मुख्य समस्याहरू भनेका मुख्य ऐन कानुन, अर्को मुख्य समस्या भनेको निर्माण सामाग्रीका स्रोतको अभाव हुन् । जस्तै निर्माण कार्यका लागि गिट्टी बालुवा चाहिन्छ । तर त्यो कहाँबाट ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा समस्या पर्ने गर्दछ । यसका लागि सरकारले ट्रान्सफर्म लिड र एक्सट्रा कर दिँदैन भने निर्माण व्यवसायीले आफ्नो खर्चबाट यो काम गर्न सक्दैनन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई टेन्डर दिन त दिन्छ तर टेन्डर दिएपछि सम्पूर्ण कार्य निर्माण व्यवसायीको हो भन्ने सोच्छ र केही पनि गर्दैन । यसो हुँदा पनि निर्माण व्यवसायमा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । निर्माण कार्य गर्दा आइपर्ने स्रोत तथा साधनका समस्यामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यो र अन्य विषयमा सरकारसँग बसेर छलफल गर्दा धेरै हदसम्म समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
तपाईहरू आफ्ना समस्याका कुरा गरिरहँदा आम जनताले गुनाासो गरिरहेका हुन्छन्,‘ निर्माण व्यवसायीका कार्यहरु समयमै नहुने, काम भए पनि कम गुणस्तरका हुने गरेका छन्’ भनेर, यस्तो किन हुन्छ ?
तपाई पत्रकारहरुले गुणस्तरको प्रश्न उठाउनु हुन्छ, र यो राम्रो पनि हो । तपाईहरूको एउटा थेगो नै छ कमशल निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग भयो भनेर पत्रपत्रिक र टेलिभिजनमा आउँछ नि । यो कमशल निर्माण सामग्री भन्ने कसरी थाहा हुन्छ ? त्यो थाहा पाउन त ल्याब टेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो ल्याबबाट नै कस्तो खालको सामग्री हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । पत्रपत्रिका र जनतालाई यसका बारेमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । काम गर्दा कहिलेकाहीँ तल माथि हुने गर्छ । दर्जनौ पुल बनाउदा दुईवटा पुल बिग्रिएको होला, १०० किलो मिटरको बाटो बनाउदा १० ओटा प्वाल परेको होला, यो सबै कार्य गर्दा मान्छे हो, मेशिनले कम्प्रेसन गर्न सकेको छैन होला, टेस्ट गर्दा पनि रेन्डमली टेस्ट गर्ने हो केही कार्य छुटेको होला । त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो र हामी त्यसको करेक्सन गर्छौ, उच्च किसिमका निर्माण कार्यहरुमा निर्माण व्यवसायीको गल्ती छ तर थोरै छ । तर यहाँ त जे गरेपनि निर्माण व्यवसायीलाई नै दोष दिने प्रचलन छ । त्यो गलत हो ।
तपाई निर्माण व्यवसायी महासंघमा जानु भयो भने निर्माण व्यवसायीका समस्याहरु कसरी समधान गर्नु हुन्छ र सरकार सँग कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त निर्माण व्यवसायी महासंघको जम्मा दुईवटा जिम्मा रहेका छन्, एउटा समयमै काम सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने । बाँकी सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारको हुन्छ । काम गरेपछि समयमै भुक्तानी दिँदैन र निमार्ण कार्य समयमै सम्पन्न हुदैँन । तर सबैले निर्माण व्यसायीले समयमै काम गरेन भन्ने लाग्छ । सबैभन्दा समस्याको जड भनेको नेपाल सरकार हो । हामी निर्माण व्यवसायीहरुले १०० करोडको कार्य गर्दा कम बिडिङ हालेर ७० करोड प्रयोग गरी ३० करोड नेपाल सरकारलाई छुट दिने गर्र्छौै, ३० करोड सरकारलाई छुट दिनु भनेको ठूलो कुरा हो । नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेर के के समस्याहरु छन्, यसका समधानहरू यसरी हुन सक्छ, यसका नीति नियमहरू यस्ता यस्ता ल्याउनु पर्छ भनेर संविधानमा व्यापक छलफल गरेर सरकारलाई यसको बारेमा बुझाउनु आवश्यक रहेको छ । यस्ता कार्यहरू बुझाउन सकियो भने निर्माण कार्यहरु छिटो हुन्छन् । त्यस्तै गरी सडक विभागले निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्षमता अनुसार कसले कति कार्य र जिम्मेवार लिन सक्दछ भन्ने बुझेर मात्रै निर्माणका कार्यहरु दिनु पर्दछ र यसको बारेमा नेपाल सरकारले पनि थाहा पाउनु पर्दछ ।
अन्तिममा, निर्माण व्यवसायीहरूलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
निर्माण व्यवसायीको कार्यलाई कसरी अगाडी लैजाँदा राम्रो हुन्छ, यसको विकास गर्नको लागि के कस्ता कार्य गर्नु आवश्यक रहेको छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुलाई कमेन्ट र आलोचना गर्न आग्रह गर्दछु । सबै निर्माण व्यवसायी जो प्रतिनिधि भएर, पर्यवेक्षक भएर आएका सम्पूर्णलाई भोट दिएर जिताउन आग्रह गर्दछु । म लोभी पापी भएर काम गर्दिनँ । म निर्माण व्यवसायी हुँ भनेर छाती ठुलो बनाएर गर्व गरेर हिड्ने वातावरण बनाउँछु । मलाई यो पटक अवसर दिनुस् भन्न चाहन्छु ।
हुमनाथ कोइरालाका एजेण्डाहरू